Hevitra MPANOHARIANA | Aprily 2015
Fomba fampitomboana vola
2015-04-26 @ 09:09 in Toekarena
Nanana ny lazany ary efa voasoratra teto amin'ity habaka ity ny revolisiona tsy naneken'ny olo-tsotra avy eny Ambalambahoaka intsony ny vola misy scotch sy ny vola rovitra. Efa misy ihany moa ny hafetsifetsen'ny sasany fa misy mahay manambatra amin'ny lakaoly indray ilay izy fa ezahiny tsy ho hitanao mandray azy mihitsy ny fisian'ny lakaoly. Ny maha-henjana azy, raha tsy mitandrina, dia misy ny mahay manambatra ny vola tsy mitovy laharana amin'ilay izy, fa be ny tsy hahatsikaritra izany loatra.
Eto indray dia resaka vola ihany sy ny fampitomboana azy no lohahevitra, mety ho gaga amin'ilay lohateny ianao, nefa dia izay ilay izy. Ny mahasoloky na tsia azy indray dia mbola baraingo na amiko na aminao ihany koa. Tsy azoko mihitsy hatreto hoe inona no tena tombontsoany na kendreny fa ny tombatombana ihany no betsaka. Vao tamin'ny herinandron'ny 19-25 avrily ity no nandrenesako ny momba azy ity, tamin'ny 24 avrily 2015 no marina kokoa.
Olona iray mipetraka sy miasa tena ao Anosizato Andrefana ao no nanontany ahy hoe: "Ahoana indray izany vola ariary zato lasa arivo, roanjato lasa roa arivo izany?". Tsy azoko tsara ny fandehan'ny resaka dia nasaiko nohazavainy. Nitantara amin'izay izy fa ambanin'ny sarin'ny Madagasikara amin'ny vola dia misy soratra bitika dia bitika, ka misy tarehimarika izy io. Izay tarehimarika rehetra miafara amin'ny 5 eo amin'io tarehintsoratra sy tarehimarika mifampitohy io no mitombo rehefa atakako dia lasa ampitomboina folo.
Gaga fotsiny aho fa tsy mbola fandreko izany. Namaly aho fa angamba vola tsy tokony hivoaka izany vola izany no tafavoaka, ka io marika io no porofony. Eo ankilany dia miaiky aho dia misy ny mahadinika zavatra bitika tahaka ireny, izaho tsy nahalala raha tsy vao izay, fa ny vola ariary zato sy roanjato ihany no tena nahitako azy. Tamin'io andro io ihany dia adinoko ny momba ilay fanakalozana mampitombo vola na dia nikasa ny hanontany any amin'ny toeran-kafa aza aho.
Ny ampitso indray, izany hoe ny 25 avrily 2015, mpiara-miasa iray tao amin'ny birao no nanontany hoe :"Ianareo ve efa nandre ilay hoe manakalo vola ariary zato lasa arivo,roanjato lasa roa arivo, dimanjato lasa dimy arivo?" Namaly azy aho fa vao omaly [zoma] no nandre io resaka io ary nanadino azy raha tsy izy no nanombo-dresaka. Dia raikitra amin'izay ny resakay teo. Andravoahangy sy ny manodidina an'Ankatso rehetra iny izany no efa nandre ilay resaka daholo. Namana iray tao Andraisoro aza nilaza mihitsy hoe ny ariary zato tany aminy no atakalo dimy arivo, ka nilaharana amin'izay ny nankeo amin'ilay olona.
Dia lasa indray ny saina nanontany hoe inona no tena tanjon'izany rehetra izany. Mbola vao eto Antananarivo izy izao fa mety hiely manerana an'i Madagasikara avy eo. Hevitra hafa indray no manombana fa mahantra loatra ilay Malagasy ka omena tsirim-panantenana kely hoe ny ariary zato mety ho lasa arivo na dimy arivo ka tongava aty aminay. Mety ho tanjona ara-psikolojia ilay izy tsy hahamora hikorontana ny olona amin'ny fahantrany. Saingy tombatombana fotsiny izany. Dia mitodika aminao mpamaky aho hoe mba inona tokoa no tanjon'izany resaka izany, araka ny eritreritrao?
Jentilisa 26 avrily 2015